Royal mwana waMeghan naHerry: chizvarwa chekuzvarwa chinozopedzisira chichiratidzira kuti ndeipi ... - TELES RELAY
HOME » VANHU & VANHU »Royal baby yaMeghan naHerry: Chirongwa chekuberekwa chinopedzisira chinoratidza kupi ...
Royal baby of Meghan naHarry: chizvarwa chekuzvarwa chinozopedzisira chinoratidza kupi ...
It's official! Muduku Archie Harrison Mountbatten-Windsor akazvarwa muchipatara uye kwete paFrogmore Cottage. Chishanu I17 May, tabloid Zuva akafukura chibharo chekuzvarwa chemwana wekutanga Meghan Markle bv Du mutungamiri Harry. Nokudaro, gwaro racho rinosimbisa kuti iri paPortland Hospital muLondon, iri muruwa rweWestminster, iyo Duchess yeSussex yakaberekerwa 6 yapfuura May, mune hukama hwakasimba hwepedyo. Inzvimbo yega yega, kupi mari yeusiku de Meghan Markle yakaenzana kwete pasi pe 15 000 pounds, kana nezve 17 000 euros, yakashuma Zuva.
Kwete St St Mary's Hospital kuitira Meghan Markle, uyo akanga asingadi kubereka mukugadzwa kupi Kate Middleton, et Lady Diana pamberi pake, akanga aberekera vana vavo. Kunyange zvakadaro, Chipatara chePortland cheLondon chakaona kuberekwa kwevamwe nhengo dzemhuri yeumambo, sezvo iri pano Sarah Ferguson, mudzimai we muchinda Andrew, akaberekera vanasikana vake vaviri, mhandara Beatrice et Eugénie. Icho chiriwo mune kliniki yega yega kuti humwe hutano hwehutano hunoratidza kubereka, kufanana Victoria Beckham, Jerry Hall kana zvakare Trudie Styler.
Asi paPortland Hospital London haisi yekutanga kusarudza Meghan Markle kuti abereke mwana wake muduku Archie. Zvechokwadi, Duchess haana kumbovanza chido chake chokuzvara mwana wayo kumba kwake muFrogmore Cottage. Zvisinei, sezvakataurwa naRebecca English mutori wenhau Daily Mail, Duchess of Sussex akanga asinadzimwe nzira dzokubereka muna muchipataranemhaka yekutora kwake pamuviri kure zvakanyanya kudarika.
Hurumende Harry naMeghan Markle, Duke uye Duchess yeSussex, vanopa mwanakomana wavo Archie mu h
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.closermag.fr/royautes/c-est-officiel-archie-le-fils-de-meghan-markle-et-du-prince-harry-est-bien-ne-a-970195
Meghan Markle WOW mukicheni achigadzirira ndiro "yakachena uye yakachena" kuna Archie Harrison